Laascaanood, 13 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Marka Dambee Aad Wax Ka Iibsaneysid Dukaamada Mareykanka, Iska Hubi Waxaad Iibsatey!/b>
Nin la yiraahdo Jim Nefarde ayaa dukaanka la yiraahdo Target wuxuu ka iibsaday Ipod. Nasiib daro markii uu gurigiisa tegey oo furay kartoonkii ayaa waxaa kaga soo baxay waxaanu fileyn. Masaxaado ama istiikadaha lagu tirtiro qoraalka ayaa laga soo buuxiyey meeshii Ipadka, taasoo yaab iyo argagax ku ridey Mr. Jim oo 600 doolar ka bixiyey.
Waxaase arintu ka sii dartay oo booliisku soo dhex galeen markii dukaanka Target ay diideen sheegashadii Jim, isla markaana ku doodeen in hadalkiisu aanu macquul ahayn. Ugu danbayntiina waxaa lagu dhexdhexaadiyey in la furo karaatuun kale lana fiiriyo in hadalka ninka dacwoonayaa run yahay iyo inkale. Nasiib wanaag markii la furey kii ugu horeeyey ayaa loogu tegey wixii uu Jim Nefarde ka dacwoonayey, waxaana markiiba la siiyey raali gelin.
Dukaanka Target ayaa amar ku siiyey shaqaalihiisa inay wada furaan kumanaan kartoon oo Ipad ah si loo hubiyo in aanay qof kale arintan oo kale ku dhicin, iyadoo dhamaan dadkii online ku iibsaday ee loo direyna lagu wargeliyey inay soo sheegaan hadii ay wax qaldan ku arkaan dalabkooda.